हिमाल खबरपत्रिका | नदी किनारका बस्ती हटाऊ
नदी किनारका बस्ती हटाऊ
हिमाल (३१ असार – ५ साउन) रिपोर्ट ‘बाढीः निम्तो दिइएको विपत्ति’ बस्ती विकास, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र नागरिकको सुरक्षामा राज्यको बेवास्ताको उदाहरण हो । विपत्तिलाई तुरुन्तै बिर्सिएर सस्तो र सजिलो खोज्ने हाम्रो बानीले पनि यस्तो विपत्ति निम्त्याउन सहयोग गरिरहेको हुन्छ । उदाहरण ताजै छ, तीन वर्ष पनि भएको छैन, भूकम्पको विपत्ति भोगेका हामीहरू मापदण्ड नपुगेका गगनचुम्बी भवन निर्माणमा व्यस्त छौं । बाढी वर्षैपिच्छे आउँछ, त्यसलाई बहने बाटो चाहिन्छ भनेर जान्दाजान्दै हामी होचो जमीन र नदी किनारमा आवास निर्माण गरिरहन्छौं, सरकारी निकाय स्वीकृति दिइरहन्छन् ।
रह्यो कुरा, जथाभावी फोहोर फालिएको हुँदा पानीको निकास थुनिएर खोलो बस्तीतिर सोझ्एिको भन्ने । यो त सानो कारण मात्र हो, खास कारण चाहिं बगरमा बसेको बस्तीले पानीको निकास छेक्नु नै भक्तपुर विपत्तिको मुख्य कारण हो । सरकार साँच्चिकै यस्ता विपत्तिबारे गम्भीर छ भने विस्तारै यस्तो क्षेत्रमा रहेका बस्तीलाई हटाउनेतिर लाग्नुपर्छ । यो मानव सिर्जित विपत्तिको निराकरण अवश्य पनि सम्भव छ ।
विदुर न्यौपाने, अनलाइनबाट
व्यवस्थित गरौं काठमाडौं
हिमाल (३१ असार – ५ साउन) आवरण ‘खुकुलो भएन काठमाडौं’ भन्नु भन्दा ‘व्यवस्थित भएन काठमाडौं’ भनिएको भए अर्थपूर्ण हुनेथियो । शहरको विकास खुकुलो पारेर मात्र हुँदैन । काठमाडौं मात्र होइन, अन्यत्रका भव्य शहरहरू कहाँ खुकुला छन् र ! तर त्यहाँको व्यवस्थापन साह्रै लोभलाग्दो हुन्छ । त्यसैले, व्यवस्थित गरौं काठमाडौं । अर्को कुरा मुलुकका अन्य शहरहरूमा सेवासुविधाको विस्तार नभएसम्म काठमाडौंको यो सकस कम हुने छैन र जनसंख्या पातलिंदा मात्रै काठमाडौं बस्नयोग्य भइहाल्छ भन्ने पनि होइन । काठमाडौंको सडक, वातावरण, पूर्वाधारको दुर्गति अकर्मण्य राजनीतिको परिणाम हो । रिपोर्टमा भनिए जस्तै केन्द्रीकृत शासन, अवसर र सेवा–सुविधालाई देशभर वितरण गर्नेतिर वर्तमान सरकारको ध्यान पटक्कै छैन, अघिल्लाको पनि थिएन ।
विशाल श्रेष्ठ, अनलाइनबाट
हिमाल (३१ असार – ५ साउन) आवरण ‘खुकुलो भएन काठमाडौं’ सान्दर्भिक छ । समृद्धिको नारा लगाइरहेको सरकारका लागि व्यवस्थित शहरी विकास र शक्तिको विकेन्द्रीकरणका लागि यो उपयुक्त समय हो । हिमाल ले देखाइदिएको बाटोलाई सार्थक बनाउनतिर सरकार लाग्ला भन्ने आशा चाहिं निकै कम छ । अहिलेको कामकारबाही हेर्दा सरकार अर्कै बाटोमा लम्किएको देखिन्छ । जनता रनभुल्लमा छन् ।
केदार पौडेल, अनलाइनबाट
चिकित्सा शिक्षा सुधारकलाई सलाम !
हिमाल (३१ असार – ५ साउन) रिपोर्ट ‘चिकित्सा शिक्षाः थिति बसाउने सहज बाटो’ समसामयिक छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारको मागसहित पटक पटक अनशन बसेर सरकारलाई दबाब दिन सफल डा. गोविन्द केसीलाई सलाम ! बहुमतको दम्भमा आएर डा. केसी जस्तालाई दबाउने हर्कत आपत्तिजनक छ । संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘समाजवाद उन्मुख’ र आफूलाई समाजवादी भनाउने अहिलेको वाम–गठबन्धन सरकारले केसीका मागलाई सम्बोधन गर्दै गरीब जनताको पहुँचमा चिकित्सा शिक्षा पुर्‍याउन प्रयास थाल्नुपर्नेमा उल्टो चिकित्सा शिक्षा व्यवसायीका पक्षमा काम गर्नु लज्जास्पद हो । आफैंले जानेर गर्नुपर्ने कार्य अर्काले दबाब दिंदा पनि नमान्नु मूर्खता बाहेक केही होइन । हिजो सरकारमा नभएका बेला केसीका मागलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्नेहरू नै अहिले केसीको विपक्षमा उभिएको देख्दा भने उदेक लागेको छ ।
आराधना पोखरेल, अनलाइनबाट
समृद्घिको बलियो आस
हिमाल (३१ असार – ५ साउन) रिपोर्ट ‘पर्यटनः गति समात्दै’ ले समृद्धिको आशा बलियो बनाएको छ । एक दशकको हिंसात्मक द्वन्द्व, त्यसपछिको लामो अस्थिरता र महाभूकम्पबाट थला परेको पर्यटन उद्योगले साँच्चै नै लय समातेको देख्दा समृद्धिको आशा पलाएको छ । भूपरिवेष्टित राष्ट्रको विकासको प्रमुख आधार पर्यटन हुनसक्छ । ढिलै भए पनि लय पक्रँदै गएको अवस्थाले देशमा स्थिरता र स्थायी सरकार पहिलो शर्त रहेछ भन्ने कुरा चाहिं छर्लङ्ग भएको छ । ‘नाम्जेमा देश रमाइलो’ ले पनि यस कुराको पुष्टि गरेको छ । अब नेपाललाई विश्वको प्रथम गन्तव्य बनाउनेतिर लागिहाल्नुपर्छ ।
कृष्ण आचार्य, अनलाइनबाट
अडान पूरा होस्
हिमाल (३१ असार – ५ साउन) व्यक्तिवृत्त ‘अडानका शरणार्थी डाक्टर’ बाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौं । ढिलै भए पनि सरकारको आँखा खुलेछ । सहयोगको हात बढाउन पुगेछ, खुशी लाग्यो । अडानका सतिसाल डा. भम्पा राईको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ र स्वदेश फर्कन पाउनुपर्ने उनको अडान कामयाव होस् भन्ने कामना ।
वासु रजौरे, अनलाइनबाट